ဒီ သီချင်းကိုတော့ဖြင့် ကော်ပီ ပြန်ဆိုစေချင်သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီ သီချင်းကိုတော့ဖြင့် ကော်ပီ ပြန်ဆိုစေချင်သည်
ဒီ သီချင်းကိုတော့ဖြင့် ကော်ပီ ပြန်ဆိုစေချင်သည်
Posted by ムラカミ on Dec 28, 2011 in Creative Writing, Entertainment, Ideas & Plans, Music, My Dear Diary, Think Different | 22 comments
ကျနော် အရှေ့ကျွန်းရောက်ကာစ က ရထားစီးလျင် ဘုရားစာ ရွတ်၏။ ရထားက မိနစ် ၅ဝခန့် စီးရသည်ကိုး။
နောက်ပိုင်း လူက အကျင့်ပျက်လာ၏။ ရွတ်ရဖတ်ရမှာ ပျင်းရိငြီးငွေ့ လာသည်။ အလုပ်မှာ အသားကျလာသည်
နှင့်အတူ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမ အပေါ် ပေါ့လျော့ လာမိ၏ ။
ထို့နောက် တွင်ကား ကျနော် ရထားစီးလျင် သီချင်း နားထောင်၏။ ကြာသော် ပျင်းလာပြန်သည်။
ထို့နောက် ကျနော် စမတ်ဖုန်း ဝယ်ကိုင် ဖြစ်သည်။ ထိုဖုန်းဖြင့် ဂိမ်းကစား၏ ။ ထိုသည်မှာလည်း
ကြာကြာမခံပါချေ ။ ကျနော်က ပဲ ငြီးငွေ့ လွယ် သလား မဆိုနိုင် ။ ထို့နောက် ကျနော် ရုပ်ရှင်ဘက်
လှည့်၏ ။ သို့တည်းမဟုုတ် မြူးဇစ်ဗီဒီယို ကြည့်၏ ။ တခါတလေ စာဖတ်၏။ တခါတလေမူ အိပ်စက်၏။
အထက်ပါ ဆောင်ရွက်မှုများကို စိတ်ပါရင်ပါသလို ဖီလင်လာရင် လာသလို အလျင်းသင့်သလို
ယခုမူ ရထားစီးသည့်အခါ လုပ်တတ်သည့် အကျင့် အသစ်တခု တိုးလာပြီဖြစ်၏။ ထိုသည်မှာ ငါဘာစာရေး
လျင်ကောင်းမလဲ တွေးတောခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တွေးတောရခြင်း ကိုလည်း နှစ်ခြိုက်လာ၏။
သီချင်းနားထောင်ရင်း မျက်စိမှိတ်ကာ မှေးရင်း တွေး ခြင်းဖြစ်သည်။
တခါတလေလည်း အတွေးစတွေ ပျံ့ကျဲ ငိုက်မြည်း ။ တခါတလေလည်း ရေးစရာ အကြောင်းရာကောင်းလေးတွေရရှိ။ ခုလည်း
သည်ကရတဲ့ အတွေးကလေး တခုကို ချရေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ သီချင်းတွေကို playlist အတိုင်း မဖွင့်ဖြစ်။ ramdom အတိုင်း ထားမိသည်။ သည်တော့ သီချင်း
အစုံနားထောင် သော ကျနော့် အတွက် နည်းနည်းတော့ ဂွကျ သွားသည်။ mood အရ ပြောပါသည်။
ဘရိုင်ယန် အဒမ်စ့် အချစ်သီချင်း အဆုံးတွင် အော့ဖ် စပရင်း ၏ Give it to me baby, uh huh, uh huh
တွေ ကြားချင်ကြားလာရသည်။ ထိုသီချင်းအဆုံးတွင် Richie Blackmore က ဖလားမင်းဂိုးစ်တွေနှင့်
ချွဲချင် ချွဲတော့သည်။ ချွဲလို့ အပြီး တွင် ထူးအယ်လင်း အသံဩဩကြီး နှင့် နင်လိုမိန်းမကို ….အစချီ၍
ကြိမ်းဝါး သည့်တေး …ပေါ်ချင်ပေါ်လာသည်။ ထိုမှတဖန် boku ga so ba ni i ru yo (Sakura) ဖြစ်ချင်
ဖြစ်သွား၏ ။ လွမ်းမောလို့မှ မဆုံးသေး ကားလို့ဆန်တဲနား နှင့် ရှကီရာ တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်သော…
illegal to deserveawoman’s heart …ကြားလို့ စိတ်မကောင်းသလိုလို တစုံ တယောက်သောသူက်ို
တောင်းပန်ချင်သလိုလို ..ဖြစ်လာရပြန်သည်။ အဲ့ဒါဆုံးတော့ သိပ်နှစ်သက်သည့် ပေါလ်ဂစ်ဘတ်က
မက္ကဆီကို သွားကြပါစို့ ထလုပ်ချင်လုပ်သည်။ ကျနော် မခံစားနိုင်တော့ ……
random နှင့် ဖွင့်သည့် စနစ်ကို နောက် ဘယ်တော့မှ မသုံး ဟု ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။
ထိုစဉ် သီချင်း အသစ်တပုဒ် ကူးသွားသည်။
ဂျိမ်း ကနဲ မိုးကြိုးပစ်ချသံနှင့် အတူ ကျနော့် ခေါင်းထဲတွင်လည်း ဂျိမ်းကနဲ ဖြစ်သွား၏။
ထိုသီချင်းကို ကျနော် မေ့လျော့ နေခဲ့တာ အလွန်ကြာပြီဖြစ်သည်။
သီချင်း က tempo မြင့်သည့် Rock သီချင်း အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ စစချင်း အတော(အင်ထရို)မှာပင်
အလွန်လျင် မြန်သော ပန်နာတောနစ် စကေးလ် တီးသံ ကိုကြားရသည် ။Tim Pierce ဆိုသည့်
ဂစ်တာသမား၏ လက်ရာ။ မြန်သည် လှသည် သေသပ်သည်။ ထို့နောက် Eric Martin ၏ တီနာ သံ
ခပ်မြင့်မြင့် ကို စကြားရသည် ။ သီချင်းက verse မှ bridge ပိုင်းကို ရောက်လာသည်။John Pierce
၏ ဘေ့စ်ဂီတာသံ ခေါင်းထောင်လာသည်။ သီချင်း၏ mood ပိုင်းအရ climax ကိုဆွဲခေါ်သွားမည့်နေရာတွင်
drum roll တွေ fill လုပ်ရသည်။ roll-in ပေါ့ … chorus မှ ပြန်အထွက်ဆိုလျင် roll-out ဖြစ်သည်။
၂နေရာစလုံးတွင် kick နှင့် tom ကို ခပ်စိတ်စိတ် နှင့် အလွန်လှပစွာ ရိုက်ချသွားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
အော် ကောင်းပေမပေါ့။ ထိုခေတ်က အလွန်နာမည်ကျော်သော Guns N’ Roses အဖွဲ့မှ drummer
Matt Sorum ၏ လက်ရာပေကိုး ။ ဖော်ပြရန် ကျန်သွားသည်မှာ chorus တွင် ပြင်းထန်ခိုင်မာသော
body(dram beats+ bass) ကို အားဖြည့်ပေးသော keyboard ပင်ဖြစ်သည်။ Kim Bullard ဆို သူ
အဆိုတော်-ပီယာနစ် ၏ လက်ရာတည်း။ Eric ကို harmony ဖြင့် ပံပိုးပေးထားသည်မှာလည်း အလွန်လှပ
လွန်းနေသည်။ ပီယာနို ကို နားမလည်သည့်အတွက် ထိုမျှသာရေးနိုင်ပေသည်။
ဟုတ်သည် သည်သီချင်းသည် ထိုခေတ်က အလွန် ကောင်းသော band အချို့ မှ ပညာရှင် တစ်ဦးစီ
ပေါင်းစုပြီး project အနေဖြင့် တီးခတ် သီဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်ရေးပါဦးမည်။ Solo တွင်
အလွန်လှသော drums ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော လျှစ်စစ်ဂီတာသံ ကိုကြားရမည်
ဖြစ်သည်။ သီချင်းအဆုံး fade လုပ်သွားပုံမှာလည်း အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိ။
တကယ်တော့ ဒီသီချင်းသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေး တစ်ပုဒ်သာဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့သည်ဟု
မှတ်တမ်းတွေက ပြောပါသည်။ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား Tom Hanks ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသော
Apollo 13 သည် အဆင့်-၁ ချိတ်ချိန်တွင် ယခုဇာတ်ကားသည် အဆင့် -၄ ရခဲ့သည်ဟု ဆို၏။
မကြာမီတွင် ကော်ပီရိုက် လာတော့မည် ဖြစ်သည်။ တပုံတခေါင်းလည်း သိန်း-သောင်း ဂဏန်း ကော်ပီခဲ့ပြီးပြီ
ဘော့ဘ်ဒိုင်လန် အစ ဘီတလ်စ် အလယ် ယူတူး အဆုံး ပဂေးကြီးတွေပါသည်။
ဒိပ်ပါပဲလ် အစ ကစ်စ် အလယ် အယ်ရိုစမစ် အဆုံး ရော့ခ် တွေပါသည်။
ဘွိုင်ဇုံး အစ ဘက်စတွိဘွိုင်း အလယ် ဝက်စ်လိုက်ဖ် လို ဘွိုင်းဘန် တွေလည်း ပါသည်။
ဒါတောင် ကွန်တမ်ပိုရေရီ ပေါ့ပ်နှင့် ရော့ခ် သာ နမူနာလောက် ချ ရေးကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အိမ်နီးနားချင်း တရုတ်-ကုလား-ယိုးဒယား နှင့် ဂျပန်သီချင်းတွေမပါသေး။
ဆိုတော့ ၁တက်ပိုစား မိလို့ကတော့ မထူးတော့ပီ .ကော်ပီရိုက်မလာခင် ဗမာပြည်၏ အောင်မြင်သော
ဘန် တခုခုနှင့် အသံပါဝါကောင်းကောင်း အမျိုးသား အဆိုရှင် တစ်ဦးကို ပြန်ဆိုစေ့ချင်မိသည်။
ထိုသီချင်း စတင်ထွက်ပေါ်ခဲ့သော ၁၉၉၅ခုနှစ်မှ ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ၁၅နှစ် ကျော် ကာလအတွင်း
ကော်ပီ ရော့်ကာများ အဘယ်ကြောင့် မျက်စိမှောက်၍ မေ့ကျန်နေသနည်း မတွေးတတ်ပါချေ ။
ပြန်ဆိုပါက အောင်လည်း အောင်မြင်မည် ဟု တထစ်ချ ယုံကြည်မိပါသည်။
တကယ်တော့ ထိုသီချင်းကို စာဖတ်သူတို့လည်း နားရည်ဝခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကြားဖူးနေသော်လည်း
အသေအချာ သတိပြု နားစိုက်ထောင်ရကောင်းမှန်း မသိခဲ့သည့် သီချင်းလည်းဖြစ်၏ ။
သူတို့ဆီမှာတော့ ယနေ့ထက်တိုင် ကြို့ကြား ကြို့ကြား ကာဗာဗားရှင်း ဝယ်ဝယ် ဆိုတတ်ကြသည်။
upload လုပ်ပြီး update လိုက်ပါပြီ
သီချင်းအရင်ယူထားကြပါ ….စာသား ရှာတင်ပေးပါမည်ရှင့်..အဲ့ ဗျာ့
P.S　အခြား ရော့ခ်ကာ များ မဆိုဖြစ်ခဲ့ပါကမူ အဆိုကောင်းသော သည်ဟု ရွာသူားများ တခဲနက်
မှတ်ချက်ပြုသည့် ရွာ့ တံခါးစောင့်ကြီး ဘဘ ဘလက်ကို ဦးနိုတယောက် ထီပေါက်ပြီး
အခွေထုတ်ပေးဖြစ် သော်လည်းကောင်း ရွာသူားများ ပွိုင့်စု၍ ထုတ်ပေးဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း
ထိုသီချင်း ကို ထည့်သွင်းသင့်သည် ဟု အဆိုပြုလိုက်ရပါတော့သည်။
ဘယ့်နှယ့် ဖတ်လာတာ အတည်ပေါက်နဲ့။
ပန်းအဝင်ကျတော့မှ ဘဘ ဘလက် ကို ဝင်တိုက်သွားပါတယ်ဗျာ။
ဘဘက ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် ပို့စ်ထဲက မောင်မောင့် လိုလူပါဗျာ။
သူများတွေ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆို ဘဘ လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
သူများတွေ ရိုဟင်ဂျာ ဆို ဘဘ လည်း ရိုဟင်ဂျာ
ဟောအခု သူများတွေ ဗိုလ်ချုပ်ဆို ဘဘ လည်း ဗိုလ်ချုပ် လုပ်လိုက်တာ တွေ့တယ်ဟုတ်။
ဟိုတလောက သူများတွေ ဧရာဝတီ ဆိုလို့ ဘဘဘလက်ကလည်း
ခေတ်မီအောင် အဲဒီ ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး သီချင်းကို Ring Tone လုပ်လိုလုပ်။ သီချင်းကိုလည်း
လူထူထူထူထူ ဆို ဆိုပြလို့ ရအောင် အပီအပြင် ကျင့်ထားလိုက်တာ။
အဘဖေါ ပွဲကျတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တစ်ပုဒ်ထဲကို အပီအပြင် ကျင့်ထားတဲ့
ဧရာဝတီ ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့ သမီး ငါတို့ ရဲ့ မိခင် ဆိုပြီး ထအော်ပြစ်ထည့်လိုက်တာ
တကယ်ကတော့ ဘဘဘလက် က ဒီနှစ်ထဲ သီချင်းမဆိုတော့ ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ။
မိန်းမ မိသွားတော့ ၊ မိုက်ချုပ် ( မိုက်မကိုင်ရ ) အမိန် ့ကျသွားလေတော့သတည်း
ကျေဇူတင်ပါသီ…. ကျေဇူ ့တင်ပါသီ…..
ကျေးဇူးတင်ပါသီ… မိတ်ဆွေဂျီးးးးး ..ဟီးးး ဟီးးးး (စတာနော်) ;)
တား အတံ ကောင်းရားဟင်..
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ ့
နားတွေ ပူလာလို ့
နားဖာချေး ကလော်တံ သွားယူပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း
နေညိုချိန် တိန်တောက်တဲ့အခါ ရွာလမ်းနံဘေးမှာ စာဥတို့ သူငယ်ချင်းတသိုက် ရေခပ်ဆင်းလို့လာ… သီချင်းလေးသံသာ မရောက်တာကြာပြီ မပေါက်တာကြာပြီ သတိရလိုက်တာ စာဥရေ… သူငယ်ချင်းတွေ စုံစုံညီညီ ပြေးလွှားဆော့ကစားတဲ့..ရွာဦးက ကုက္ကိုပင်အောက်မှာ…
သီချင်းဆိုတာ ဝါသနာပါလို့ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ဖတ်လိုက်ပါတယ် လိုရင်းကိုမရောက်ခင် မျက်စိတွေ ပြာလာလို့ မျက်မှန်၁လက် အမြန်လုပ်ပြီးမှ ပြန်ဖတ်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားရင်း အကုန်ပြီးအောင်ဆက်ဖတ်လိုက်ပါတယ် ဒီလောက်အထိ အချိန်တွေပေးပြီး ရေးနိုင်တာကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်ရှင့်
ဂီတ အကြောင်း နားလည်ဖို့ ပါရမီမပါသူမို့ Orchestra သံစုံတီးဝိုင်းကြီး ကို နားထောင်ရင် ဘယ်က ဘာ အသံထွက်နေတယ် ဆိုတာ မသိတဲ့ အထိ ညံ့ပါ၏။
သို့ပင်သို့ငြားသော်လည်း – မတူတဲ့ အသံတွေ စုပြီး အင်အားကြီးပြီး လှပတဲ့ အသံတစ်သံ ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ စည်းလုံးမှုရဲ့ အင်အားကိုတော့ အလွန်ပင် နှစ်ခြိုက်ပါ၏။
ဗဟုသုတ အတွက် ကျေးကျေးပါ။
BTW – Did you have the collection of those …. as you wereaboy who should have an interest in them? Mosy of the boys are so crazy on them. :-)
Am I right ????? ;-)
အော်ခက်စထွာ …မြူးဇိ ကို မကြိုက်ပါ…
ရော့ခ်တွေရဲ့ ကော်လရှင်တော့ ရှိပါသည်…
အဘိုးကြီးဖြစ်လာသောကြောင့် ခုနောက်ပိုင်း အသစ် သိပ်နားမထောင်ဖြစ်တော့ပါ…
စကားမစပ် စတိဗ် နဲ့ ဘီလ် အကြောင်း
သီချင်းတင်ပီး update လိုက်ပါပြီခင်ဗျား …အံ့ဩ နှစ်ခြိုက် စေရမည်ဟု အာမခံပါသည်
နင့်ပိုစ်တွေကို ကွန်မန့်မရေးဖြစ်တာ များပြီ
မဖတ်ဖြစ်လို့ မဟုတ်ဘူး ..။ ကိုယ်နဲ့ ညဏ်မမှီတော့ ဘာရေးရမှန်းကို မသိလို့
ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကိုယ်လဲ ညံ့တဲ့လူတော့ မဟုတ်ပါဘူး..။
လိဒ်ဂစ်တာသမားပါ..။ တီးဝိုင်းလဲ ထောင်ထားပါတယ်..။ဒါပေမယ့် နင်က မတောက်တစ်ခေါက်ဆိုပြီး ပညာတွေပဲ ထုတ်ထုတ်ပြနေတော့ ဂျို့ထိုးချင်ပေမယ့် အောင့်အီးနေလိုက်ပါကြောင်း …
အောင်မယ်ငီး ကိုယ့်ဆြာ ရယ် …ကျုပ်က အဖြစ်မရှိပါဘူး …
သီအိုရီ ဖတ်ဖြစ်တာက တခါက ချစ်ကြောက်ရိုသေရသူလေး ဆီမှာ…
ဂေ့ါစပယ် ဆည်းပူးခဲ့လို့ပါ ….(ဂယ်က ၃လကျော်တာတောင် ….ဝက်ဒင်သီချင်းကို အတက်ပဲ တတ်သေး..
အဆင်း မတီးနိုင် ….. ရှက်ထှာ ပြောပါနဲ့တော့ ….)
အဲ့လာတွေ ထည့်မရေးလို့ပါဗျာ ..ဟီး …
ပြောရင်း ရှက်လာဘီ ….
စကားမစပ် ကျုပ်တင်ထားတာလေး နားထောင်ကြည့်ဗျ…
နောက်နှစ်လောက်ဆိုခင်ဗျားအိမ်မှာ ကျိန်းသေပေါက် ကြားရတော့မယ့် သီချင်း
နဲနဲ အားနေလို့ ဂီဂီ ကို ကူညီလိုက်ပါတယ်။
စည်းလုံးခြင်းကို ပြချင်လွန်းလို့ပါ။ LOL ;-)
တကယ်ကောင်းတဲ့ သီချင်းပါဗျာ …
ကလေးကား ခပ်ပေါပေါ ဆိုပြီး အန်ဒါစတီမိတ်လုပ်ခံထိ ရှာတဲ့ သီချင်းလေးဘာ …
အဲ့သည့် ဗိုကယ်လစ် က ဂျာပွန်မှာ အရမ်းပေါက်တယ်လေ…
ဂျာပန်တွေ ဘိုစာ လေ့လာချင်ရင် သူ့သီချင်းတွေနဲ့ လေ့လာကြတာ…
သည်တော့ ဆိုနီ ဂျာပန်က သူ့ကို စာချုပ်ချုပ်ပြီး ..ကာဗာ တွေပြန်ဆိုထုတ်တယ်..
Mr. Vocalist I, II ဆိုပြီး ….
အီတာနယ် ဖလိမ် အစ ဟီးရိုး အလယ် မိုင်ဟာထ့်ဝယ်လ် ဂိုး အွန် အဆုံး..
ယောက်ျားသံနဲ့ ပြန်ဆိုထားတာ ကြားဖူးတယ်ဆိုရင် ..အနှီ ဆြာသမား လက်ချက်ဖြစ်ပါကြောင်း
နောက်တာပါ။ မဟုတ်ရင် စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ :-)
ဟုတ်ပါတယ် အစ်မရဲ့ ….
ကျနော် ရေးထားတဲ့ သီချင်းက Go Go Power Rangers …တဲ့ …
ကလေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်း …သည်ခေတ် လူလတ်ပိုင်းရောက်နေတဲ့လူတိုင်း…
ငယ်ဘဝက power rangers သီချင်းကြားဖူးနေကြမှာ မလွဲပါဘူး …
ကျနော် တခုတ်တရ ဖော်ပြလိုက်ဖြစ်တာက …. သူ့ခဗျာ ကောင်းပင်ကောင်းလျက်နဲ့ …ရသင့်ရထိုက်သလောက်
အသိအမှတ်ပြုခံရမှု မရှိတဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်နေလို့ပါ ….
အဲ့သည့် ဆြာကြီးတွေ တကယ် အတည်ကြံပြီး ကြိုးစားထားကြတာပါ…
အပြစ်ကတော့ တခုပါပဲ ..ကလေးကြိုက်ကား တစ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေး ဖြစ်နေတာကိုး…
ကလေးတွေက Go Go Power Rangers ..Go Go Power Rangers ..
အော်တယ် …လူကြီးတွေက …ဆိုလွယ်တေး ဆိုတာမျိုး …ပဲ သတ်မှတ်ထားတယ်…
အင်း … ကံဆိုးချင်တော့ …ကျနော်တို့ ဆီမှာ …စာတမ်းထိုးမှာ ဖွင့်တဲ့သီချင်းဆို …
Forward နဲ့ ရစ်ပစ် ကျော်ပစ်ခံ ထိတာများတယ်လေ. ….
value တဲ့ စာလုံးလေးကလှတယ် … ကျနော်တို့ အလေးမထားမိသော ..
အကျိုးအမြတ်ရနိုင်ခြေ မရှိလောက်ဘူးဟု ယူဆပြီး သကာလ အလေးမထားမိခဲ့လို့ အကျိုး မပြုနိုင်ခဲ့သော အရာများ…ရှိနေခြင်းကို
untitled the best လောက် မပြောရဲပေမယ့် unsung heroes အနေနဲ့ ဒါမျိုးတွေ ရှိနေသေးတယ်.. ဆိုတာ လောက်တော့ ပြောပြချင်ပါသည်…..
ဘာသီချင်းများလဲလို့ နားထောင်ပြီးမှ သိတယ် …
အဲ့ဒီသီချင်းကို ဒီမှာ ကော်ပီလို့ကတော့ ကလေးတို့ မိခင်တွေ တော့ သေချင်စိတ်ပေါက်မှာသေချာတယ်…
အခုလောလောလတ်လတ် ဟိုဘက် အိမ်က မူကြိုတက်နေတဲ့ တူလေးကို ငြိမ်ဆေးကျွေးချင်ရင် အဲ့ဒီကားကို ပြလိုက်ရတာပဲ …..
ကြာတော့ မုန်းလို့တောင်နေပြီ….. တခါတခါ သားအမိနှစ်ယောက်စိတ်ဆိုးရင် တူလေးက အဲ့ဒီခွေကို ဟိုပစ်ဒီပစ်နဲ့….. ခွေတွေ ဖွင့်လွန်းလို့ ထစ်ထစ်သွားလို့ စပယ်ယာတွေ ဝယ်ထားရတယ်…….
ဒါတော့ ကန့်ကွက်တယ် … မစ္စတာဂီလို ပညာရှင် မဟုတ်လို့ မခံစားတတ်ဖူး……
သီချင်းဆိုရင် အကုန်ကြိုက်ပေမဲ့ …. ဒါတော့ နိုး…
တခြားသီချင်းဆိုရင်တော့ နည်းနည်း စဉ်းစားမယ်…
မစ္စတာဂီရေ ကော်ပီဆိုလို့ ကျနော်လူပျိုပေါက်အရွယ်က အကိုနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တယ် ကားက ဟောင်ကောင်ဂျက်မကား ဇာတ်ကားကြည့်နေရင်းနဲ့ တဝက်လောက်ရောက်တော့ သီချင်းတပုဒ် ထွက်လာတယ် သံဇဉ်အလိုက်က ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ကမ်းစပ်တို့ကကမ်းစပ်သီချင်းအလိုက်ဆိုတော့ ကျနော်က အံ့အောဝမ်းသာပြီး ဟာအကို ကျနော်တို့သီချင်းကို ကူးချထားတယ်နော်လို့ အားပါးတရပြောလိုက်မိတယ် အကိုကတိုးတိုးလေး ပြန်ပြောပါတယ် အဲဒါတိုက ကော်ပီပြန်လုပ်ထားတာတဲ့ ကိုယ်ကလဲ တောသားဆိုတော့ကာ ကော်ပီဆိုတာကြီးကို အဲဒီတော့မှ စသိတာဗျို့။
အော် စောစောက ပြောလိုက်ပြီးရော။
တူလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီကောင် ပါဝါရိမ်းဂျား ကြိုက်ပုံကိုပြောရရင်
ညအိပ်ရင်တောင် ပါဝါရိမ်းဂျား အခွေကို ရင်ခွင်ထဲ ပိုက်အိပ်တဲ့ကောင်၊ အဲဒီလောက်။
အဲဒီသီချင်းကို ဘဘက4Shared က ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတာ။
အခုအဲဒီကောင် ၆ တန်း။
ဒါပေမယ့် အဲဒီသီချင်းကိုတော့ ကြိုက်သေးတယ်ဗျာ။